Imfesane yoKhathalelo kaCraig Ferguson ‘yeLate Late Show’ - Itv
Eyona Itv Imfesane yoKhathalelo kaCraig Ferguson ‘yeLate Late Show’
Imfesane yoKhathalelo kaCraig Ferguson ‘yeLate Late Show’
UCraig Ferguson ugcwele iimvakalelo. (Imifanekiso kaGetty)
Xa u-Archbishop Desmond Tutu wayetyelele Umdlalo wokugqibela ngo-2009, kwakungekho ndwendwe lomculo okanye undwendwe lwesibini, kwakungekho monologue yeepunchline kumakhadi e-cue kwaye akukho banter ikrelekrele enenkokheli yecala okanye ibhendi. Njengoko yayiyiminyaka eli-10, yayinguCraig Ferguson, abaphulaphuli bakhe kunye nesitayile esithe ngqo, esithandekayo awasenzayo.
UFerguson ukhumbule ngesiqendu esaphumelela uPeabody kwaye ngakumbi udliwanondlebe kunye nobhishophu omkhulu kwincoko le yangokuhlwa yangoMvulo ePaley Centre yeMedia eBeverly Hills, ekhumbula umzuzu ekwabelwana ngawo ngexesha lekhefu lezorhwebo.
Le yindoda eyathetha nomama ogezayo **** rs, utshilo uFerguson. Wathi kum, 'Uyaphambana-andizimisele ukuba krwada.' Ndathi, 'Ndiyabulela, Tata Tutu.' Wathi, 'Hayi, uyaphambana, kodwa uhlobo lophambene esilufunayo. Kwaye ayisiyiyo iarhente yakho, uyazi, akafani, 'Qhubeka usenza into ephambeneyo!' NguDesmond Tutu esithi 'Yiba ngathi uyaphambana njengokuba unjalo.' ndiyaphambana ngendlela othanda ngayo. ’Ndaziva ndikhululekile ukuba ndikhululwe yiyo.
Ukuthi uyamnkele ukuba ukusangana kuya kuba yinto ephantsi.
UCraig Ferguson uya kuwugqiba umdlalo wakhe njengomphathi we Umdlalo wokugqibela ngokuhlwanje emva kweminyaka eli-10 kunye neziqendu ezingama-2 058 ezisemva kwakhe. Isibhengezo sokuhamba kwakhe size ngexesha lotshintsho olothusayo lwe-CBS kule ntwasahlobo idlulileyo, xa Ukufika kade Umninimzi uDavid Letterman wabhengeza ukuba uzothatha umhlala-phantsi kwishishini, kwaye kungekudala kwagqitywa kwelokuba uStephen Colbert (ophele unyaka wakhe alithoba ebaleka Ingxelo kaColbert phezolo) yayiza kuthatha indawo. UFerguson walandela ngokulandelayo, evakalisa ukuba uza kuwugqiba unyaka emva koko ahambele kwinto entsha. Kwelinye icala, umdlali weqonga uJames Corden uya kuthatha indawo ye-12: 35 kusasa ngexesha ngo-Matshi 2015.
Njengokubaleka okuninzi kukaFerguson, ukuphuma kwakhe kuye kwehla kakhulu phantsi kwe-radar, kugutyungelwe kukutshintsha rhoqo ebusuku kwaye kudluliselwe ixesha elinomtsalane ngakumbi. Kodwa ngelixa amehlo ayephumile kuye, wenza owona mboniso ungakhange ubukele kwaye uyinto engenaloyiko kwaye eyingqayizivele, umbono onqabileyo kwilizwe lenkqubo lokuphinda usebenze kwaye uphinde usebenze kwakhona.
Ngeyona ndlela ibalaseleyo, ukubukela Umdlalo wokugqibela ngamanye amaxesha unokuziva ngathi ngumbono omkhulu. Ngokuyinyani umboniso wokuchasa intetho, inkqubo eyure-elide yaphinda yakha izithethe zasebusuku ezinesakhiwo esincinci njengomboniso wasebusuku. Ukuvula okubandayo kunokuba yiyo nantoni na - isiketshi, inombolo yomculo, ukubuzwa kwelungu labaphulaphuli. Kwakungekho bhendi kwaye ngamanye amaxesha akukho mandla. Uninzi lwengqesho yakhe lwadutyulwa kwisitudiyo esingakhanyiswanga kakuhle (awayedla ngokubhekisa kuso njengesakhiwo sakhe esingaphantsi) kwaye nengoma yengoma ithi,… kulungile, sele ulapha. Ngaba unokubambelela ngokujikeleza, akunjalo?
Kwakukho icala elisecaleni. NjengoDave unoPaul noConan unoAndy, uCraig wayeneGeoff Peterson (evakaliswe nguJosh Robert Thompson), irobhothi elinamathambo asebenza ngasemva eqongeni. UPeterson, owaqala ukubonakala kumdlalo we-2010 ekuqaleni wayenamagama ambalwa abhalwe kwangaphambili ukuba ahlekise kumdlalo we-banter ophakathi komninimzi kunye ne-sidekick kwiifomathi zentetho esemgangathweni kodwa ekugqibeleni waguqukela ekusebenzeni ngokukuko kunye nokukhawuleza okukhohlisayo okwenziwa nguFerguson off kubanda evulekileyo ukusondela.
Wayephethe i-Secretariat, ihashe le-pantomime elaliza kuthi ngaphambili liphume lize lidanise xa kunkqonkqozwa emnyango kwaye uFerguson wakhala, Ngubani lowo usemnyango? Othe ekugqibeleni wafuduselwa kwinqanaba elizinzileyo elashiywa xa istudiyo safumana ukuvuselelwa ngo-2012. Kwakukho oonopopi, abafana no-Sid uMvundla omdaka kunye nengwenya yaseCajun Wavy Rancheros. Kwakukho uSandra, intloko yomkhombe elawulwa kude ngaphezulu kwendawo yokubasa yomlilo yesitudiyo, oonodoli bobabini uDrew Carey noMorgan Freeman kunye neembonakalo ezivela kuLarry King ukuya kuSir Michael Caine.
AmaGags ayeza aze ahambe. Ngamanye amaxesha bafumana izikhalazo kwaye ukubonakala kwabo rhoqo kuya kunyuka ngokumangalisayo. Ngamanye amaxesha ngekhe bashiye (sinomfanekiso kaPaul McCartney?). Kodwa babekwindawo ngaxeshanye ngenxa yokuba babemhlekisa uFerguson, kwaye abaphulaphuli babenethamsanqa ngokwaneleyo ukuba babe ngabo abakhwele.
Apho iFerguson ichuma khona ubukhulu becala ayikho kumxholo okanye kulwakhiwo kodwa kukuziqhelanisa. Amagqabantshintshi akhe amatsha ayesandul 'ukwenziwa kwaye atyhafiswa luluhlu lweendawo zokuthetha, isimbo awasithatha kuphela iinyanga ezimbalwa ukubaleka xa efumanisa ukuba i-ad-libbed filler wayeza kuyizisa phakathi kwamahlaya abhaliweyo ahlekise ngakumbi kunamaqhula ngokwawo.
Ngokumalunga nodliwanondlebe, akukho namnye umabonwakude osondele ngakumbi. Ngefashoni eqhelekileyo kaFerguson, uluhlu lwemibuzo elungiselelwe umvelisi awayenayo lundwendwe ngalunye lwaphela lucandekile lwaphoswa phantsi. Ukuba kukho imida okanye imigca enqamlezileyo, uFerguson wayeyingcali yokuzifihla. Wanyanzelisa iindwendwe zakhe ukuba zicinge ngeenyawo zazo kwaye zikhululeke kancinane. Kwakungathi ubekhe wamamela incoko yomntu othile kunokuba ubukele umntu othile ezama kunye nokuthengisa imveliso, nokuba undwendwe lwaluneprojekthi yokuyazisa, lwenziwa njengabahlobo nje babini. Wayenobuchule obungenakuthelekiswa nanto bokuguqula ukungonwabi okanye into engenakwenzeka ibe kulindeleke kakhulu kwaye kumnandi, kungazange kubonakale ngakumbi kunalapho xa undwendwe lwalukhetha indlela abafuna ukulugqiba ngayo udliwanondlebe. Bangadlala ilungu lomlomo okanye bazame ukuphumelela ibhaso elikhulu lemali okanye bachukumise ibhola yakhe ebengezelayo (usasebenza kuloo nto). Okanye banokukhetha ukunqumama okungathandekiyo, apho bebeza kuhlala bethe cwaka ngendlela engathandekiyo kwaye uFerguson - ummeli wobuchule bakhe bokujika into ingabikho - esakwazi ukwenza imizuzwana engama-30 ye-airtime ethe cwaka.
Yintoni esebenze Umdlalo wokugqibela ayinakuguqulela kakuhle kwezinye iinkqubo zefomathi efanayo, kodwa yayivumela ngenxa yokuzimisela kukaFerguson ukungacocwa kwaye avule kwaye athembeke kubaphulaphuli nakubo. Umbukeli okwesihlandlo sokuqala ngokuqinisekileyo unokukhawuleza akhombe awona mahluko ungathandekiyo phakathi komboniso kunye nemiboniso yabalingane bakhe: ukungahoywa ngokucacileyo komhloli wezinto. Ubukhali obukrelekrele kunye nomlomo ongcolileyo, yayingengomboniso ungakhange ubone ubuncinci beeflegi zehlabathi ezihleliweyo ngaphezulu komlomo womninimzi, nto leyo yayihlazisa umvelisi uMichael Naidus, lowo uFerguson wayeza kuthi ngokuqhula ambize ngobuhlanga.
Ngelixa wayehlala ehlekisa, wayeqwalasele (ngamanye amaxesha egxeka), ekhuthaza kwaye ethetha phandle, uhlala edibanisa intliziyo nehlazo. Ngo-2007, ngelixa lonke ilizwe lasebusuku lakrazula u-Britney Spears ngokwahlukana kwakhe, uFerguson wanikezela i-monologue yakhe ukuze amkhusele, evula malunga nokusela kwakhe, ukusebenzisa iziyobisi kunye nokuzibulala. Uchithe lonke ixesha lokudumisa abazali bakhe emva kokubhubha kwabo. Indoda inomdla omkhulu ekuthandeni izwe layo kangangokuba yasikhumbuza yonke imihla ukuba, ibilusuku oluhle eMelika, yanikezela umboniso wayo wokuqala emva kokunikwa ubumi baseUnited States kwisikhundla sayo esitsha, kubandakanya necandelo lomsitho kunye nokusebenza kombhobho kunye needrama yi-Wicked Tinkers, ethi uFerguson ajoyine ukungqina ukuba wayeseScotland nje ngokuba wayenguMelika.
Kwaye ke kwabakho iintsuku ezingekhoyo kangako eMelika, njengomboniso wokuqala emva koqhushumbo lwemidlalo bhanyabhanya e-Aurora, eColorado, apho ahambisa khona evulekileyo ebandayo ezimpahleni ezingasemva kwetafile yakhe, okanye kwi-monologue yakhe emva kweBoston. Ibhombu yeMarathon ngo-2013, evakalisa izinto ezingaqhelekanga zempambano kunye nokunyanzelisa ukuba wayengenguye umhlekisi ngokwaneleyo ukuba aqhubeke nomboniso esenza ngathi akukho nto yenzekileyo.
Obo buchule bokudibanisa intliziyo kunye noburharha yinto efumene uFerguson ngokunyaniseka kwakhe ekuhambeni kweminyaka. Kwaye ngelixa ehlala egxotha okanye engenazimpembelelo malunga nefuthe lakhe kubaphulaphuli bakhe (kwincoko yaseNew York Paley Centre kunye INew York Times Intatheli uDave Itzkoff ngo-2012, xa ilungu labaphulaphuli labuza ngexesha le-Q & A ukuba ukholelwa ukuba yintoni unobangela wesiseko sabalandeli, uFerguson waphendula ngehlazo, u-Estrogen.), akukho nto iyiphikisayo into yokuba nantoni na iyahamba, akukho ngqondo yobuyatha Umdlalo wokugqibela idibene nabaninzi. Ubudlelwane phakathi kukaFerguson kunye nababukeli bakhe yayiyinto yokuqonda kunye novelwano. Ababukeli abaqhelekileyo bafumene into abanokucofa kuyo, kwaye abona bantu banyanisekileyo baziqonda kuyo. Kufanelekile ukuba uFerguson abhekisele kubalandeli bakhe be-Twitter njengeRobot Skeleton Army yakhe. Kuyafaneleka ukuba uchithe ixesha elithile kwimiboniso yonke ephendula ii-tweets kunye ne-imeyile evela kubabukeli, esithi ngothando wayethetha nababukeli njengamahobe angcolileyo okanye iinkawu ezinamahlathi, nokuba wayejikeleza kwilizwe lonke ixesha elininzi enyakeni, nangona wayesenza umboniso weentsuku ezintlanu a iveki. Inkolo elandelayo yomboniso yayinjalo ngenxa yokuba uFerguson wayengenakukwazi ukudibanisa nabo wayefuna ukuba nabo, nokuba wayefuna ukuyivuma okanye cha.
Umdlalo wokuLate emva kwexesha kunye noCraig Ferguson ibikhethekile kwaye iya kuhlala ikhethekile. Umboniso uphambukile kwindlela, ngamanye amaxesha ukuza kuthi ga ngoku uphele kumazwe ahlukeneyo kangangeveki, njengeFerguson's native Scotland apho yena kunye neendwendwe ezikhethekileyo, ezinjengoMila Kunis, uDavid Sedaris kunye noMichael Clarke Duncan ongasekhoyo banike ababukeli ukhenketho olubonakalayo. Umboniso wakhe we-1 000 wabanjwa ngokupheleleyo ngoonopopi bakhe. Waye wanikezela isiqephu sonke kumdlalo we-BBC sci-fi Ugqirha Ngubani , Gcwalisa ngenombolo yomculo ekhethiweyo. Wasingatha isiqendu esingaphantsi kwabaphulaphuli kwaye wachitha nje iyure ethetha nomntu ngamnye kunye nendwendwe uStephen Fry.
Kwaye yonke iminithi yayo yonke yayimnandi.
Akukho mntu unokuze akulungiselele ukubukela isiqephu sikaFerguson Ukufika emva kwexesha . Umhlobo akanakukuhlalisa phantsi awuchaze (Ewe, iyimeta ngokwenene kwaye iyakha kwaye kukho ihashe). Kwakungekho ndlela ilungileyo yokuyicebisa. Yinto oyifumanisileyo kwaye waba yinxalenye yayo. Kwafuneka ukhubeke kuyo wedwa, mhlawumbi ungaphumli okanye uyadika okanye ufuna nje ukwazi xa ujikeleza amajelo xa iliso lakho likhawuleza libambe impambano. Kwaye lelona candelo lililo. Yayisisipho esingalindelwanga. Okona kubi kakhulu, isenokukuthumela ukuba ulale uncwina kwaye uthuthuzeleke. Eyona nto yayiyeyona ibalulekileyo, yayiyinto yobugcisa. Kwakubudenge kwaye kumnandi kwaye ngokwenyani akufani nawuphi na umboniso ebusuku.
Okanye ukubeka ngcono, yayilempambano esasiyifuna.
UDavid Spade kuDumo, 'Akaziwa' kwaye Kutheni Ewonwabile Ukuba Noloyiko
'Amadoda Amancinci' afaka iPair yaMakhwenkwe alwayo ukuze kugcinwe ubuhlobo buqhekekile
'Abafazi bokwenyani beBeverly Hills' Buyela kwakhona kwi-7 × 06: Iintsana eziVuselelayo kunye neLesibian eziLandelayo
Ukuphazamiseka, iyelenqe, iRussia: I-Clinton Camp Hypocrisy ikhula ngaphezulu kwe-Comey Firing
Ngaba gwen kunye blake nangoku ukuthandana
eyona ndawo yokuthenga umsesane
isitshixo sasisesinqwini sam
Ndizifumana njani iirekhodi zokubanjwa simahla
Ngaba ikofu ikwenza uchame kakhulu